Multi-Vitamin: November 2011
သုက်ပိုးခိုးပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးယူကာ ကလေးစရိတ်တောင်းမှု တက္ကဆက်တွင်ဖြစ်ပွား
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှ အသက် ၃၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဂျိုးပရက်ဆီးလ်ဆိုသူက သူ၏အတူနေချစ်သူဟောင်း အနီထရီယာဘားနက်သည် သူ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အသုံးပြုပြီးကွန်ဒုံးများမှ သုက်ပိုးခိုးယူကာ ပြင်ပတွင် သန္ဓေအောင်စေသည့်နည်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ကလေး စရိတ်နှင့် အခြားခံစားခွင့်များရရှိစေရန် ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယင်းစုံတွဲသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ခြောက်လတာ အတူနေခဲ့ပြီး ယင်းနောက်တွင် အနီထရီယာတွင် အမြွှာကလေးနှစ်ဦး မွေးဖွားခဲ့သည်။ပရက်ဆီးလ်သည် ကွန်ဒုံးအမြဲသုံးခဲ့သောကြောင့် အနီထရီယာက ကိုယ်ဝန်ရှိနေ သည်ဟု ပြောသောအခါ အံ့အားသင့်ခဲ့သည်။ ဒီအင်န်အေစစ် ဆေးမှုများအရလည်း ကလေးအဖေဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် ကလေးစရိတ် တစ်လလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၀၀ ထောက်ပံ့ခဲ့ရသည်။
အနီထရီယာသည် ပရက်ဆီးလ် နေအိမ်တွင် နေထိုင်ခွင့်ရရန် တရားရုံးမှ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့သလို ပရက်ဆီးလ်ပိုင်ဆိုင်မှု ထက်ဝက်ခန့်ကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။
တစ်နေ့တွင် ပရက်ဆီးလ်မှာ မျိုးဆက်ပွားဆေးခန်းတစ်ခုမှ သူ့လိပ်စာတပ်ထားသော ငွေတောင်းခံလွှာကို အမှတ်မထင်ရရှိခဲ့သည်။ လက်မှတ်ထိုးရမည့် စာရွက်တစ်ခုလည်း တက္ကဆက်မျိုးဆက်ပွားဆေးခန်းက
ပေးပို့ခဲ့ရာ ရိပ်စားမိလာခဲ့သည်။ အနီထရီယာသည် လိင်ဆက်ဆံပြီးသောအခါ ကွန်ဒုံးများကို သိမ်းထားပြီး ဆေးခန်းသို့ ယူဆောင်သွားကာ ကိုယ်ဝန်ယူရန် သိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြောင်းပါ သိရှိခဲ့သည်။
ကလေးစရိတ်ထောက်ပံ့မှု ရပ်တန့်ရန်နှင့် ကလေးအုပ်ထိန်းခွင့် ရရှိရန်ပရက်ဆီးလ်ကတရားစွဲဆိုထားသည်ဟု
Posted by 925 at 08:450comments
မလေးရှားတွင် အမျိုးသမီးသီးသန့် အငှားယာဉ်များ ချထားပေး
လူစီး ရထားတွဲ များအတွင်း ပန်းရောင် ရထားတွဲကို စီမံပေးအပြီးတွင် မလေးရှား နိုင်ငံအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား စော်ကားခံရမည့် ဘေးမှ ကာကွယ်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ရပ်အဖြစ် အမျိုးသမီး သီးသန့် အငှားယာဉ်များကို စတင် ပြေးဆွဲပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မီဒီယာသတင်းများတွင် တနင်္ဂနွေနေ့က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ လမ်းမများပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများမောင်းနှင်သည့် အငှားယာဉ် အစီး ငါးဆယ်ကို စတင်ပြေးဆွဲ ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကာ on-call ခေါ်ဆိုမှုဖြင့် ငှားရမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ကားအစီးရေကို အစီး ၂၀၀ အထိ တဖြည်းဖြည်း တိုးမြှင့် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
Posted by 925 at 07:580comments
ယောက်ျား​​ဖြစ်သူ​အား​​ ​​ရောင်း​​ချလို​​ကြောင်း​​ အမျိုး​​သမီး​​တစ်ဦးက အွန်လိုင်း​​တွင်​​ကြော်ငြာ
“လွယ်လွယ်ကူ​ကူ​ ထိန်း​​သိမ်း​​ထား​​နိုင်ပါတယ်။ ၃ နာရီက​​နေ ၅ နာရီခြား​​​လောက်မှာ တစ်ခါ ထမင်း​​​ကျွေး​​၊​ ​​ရေတိုက်ရုံပဲ”ဆို​​သော ​​ကြော်ငြာစာသား​​ကို Craigslist ဝက်ဆိုက်တွင် အထင်း​​သား​​ ​​တွေ့​​နိုင်သည်။ အမျိုး​​သမီး​​ တစ်ဦး​​က သူ​မ၏ ​​ယောက်ျား​​ကို ​​ရောင်း​​ချလို​​ကြောင်း​​ Classified ကဏ္ဍတွင် ​​ကြော်ငြာထား​​ခြင်း​​ဖြစ်သည်။
အ​​မေရိကန်နိုင်ငံ၊​ ယူ​တား​​တွင် ​​နေထိုင်​​သော အဆိုပါ အမျိုး​​သမီး​​က သူ​မ၏ ​​ယောက်ျား​​သည် Call of Duty: Modern Warfare3ဂိမ်း​​ကို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင် ရရှိကတည်း​​က သူ​မကို လှည့်​​ပင် မကြည့်​​​တော့​​သဖြင့်​​ စိတ်ကုန်​​နေပြီဟု ညည်း​​ညူ​ခဲ့​​သည်။ အသက် ၂၂ နှစ်ရှိ ကိုင်လီဘာဒ​​လေသည် ဂိမ်း​​ဝါသနာအိုး​​ တစ်ဦး​​ဖြစ်ပြီး​​ အာဖဂန် နစ္စတန်တွင် စစ်မှုထမ်း​​ရာမှ ဒဏ်ရာရပြီး​​ အနား​​ယူ​ခဲ့​​သည်။ ယခုအခါ ၎င်း​သည် အိမ်တွင်း​​​အောင်း​​ကာ ၃ ရက်ဆက်တိုက် အဆိုပါ ဂိမ်း​​ကို အသည်း​​အသန် ​​ဆော့​​ကစား​​​နေရာ ဇနီး​​ဖြစ်သူ​ ​​အေလီဆီ ဘက်ဒ​​လေက ​​ဒေါသထွက်​​နေခြင်း​​ဖြစ်သည်။ သို့​​​သော်လည်း​​ ​​နောက်ပိုင်း​​တွင် သူ​မ၏ ​​ကြော်ငြာသည် ခင်ပွန်း​​သည်ကို စိတ်ဆိုး​​မိသဖြင့်​​ ​​ယောက္ခမနှင့်​​ တိုင်ပင်ပြီး​​ ဟာသလုပ်ခဲ့​​ခြင်း​​ဖြစ်​​ကြောင်း​​ ပြန်လည် ​​ပြောကြား​​ခဲ့​​သည်။
Posted by 925 at 07:110comments
လာပြန်ပြီ .... ဒီဇိုင်း အသစ်နဲ့ ကိတ်မုန့်တဲ့။ အားလုံး ကိတ်မုန့်အစစ်တွေချည်းပဲနော်။
ကိတ်မုန့်ကိုကြည့်တာနဲ့တင် ဗိုက်ဆာနေတဲ့သူတွေတောင် ဗိုက်ထဲက မရှိမဲ့ရှိမဲ့ အစားအစာတွေ ပြန်ထွက်လောက်တယ်။ ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ ကိတ်မုန့်လေးတွေကို ရှုစားတော်မူကြပါ ခင်ဗျားးးး။
Posted by 925 at 09:41 1 comments
ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်ခါတစ်ရံလူကြီးတွေပြောတာကြားဖူးပါသည်။ " သိပ်အရူးမထကြနဲ့ " တဲ့။
အဲဒီတုန်းက ဘာမှန်းကောင်းကောင်းမသိခဲ့ဘူး။ အဲဒီတုန်းက အရူးထခဲ့တာလေးတွေ အောက်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ နဲ့ တွေ့လိုက်တော့မှ ငါ အရူးထခဲ့တာ မူကြိုအဆင့်ပဲရှိပါလား။ သူတို့တွေအရူးထ တာမှ Ph.D အဆင့်ရှိမှန်း သိလိုက်ရပါတယ်။ Ph.D မရရင်နေပါစေ....မူကြိုလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်တော့မယ် :D
Posted by 925 at 07:190comments
ခင်ပွန်း ကို သတ်ပြီး၊ ချက်စား ရန် စီစဉ် သည့် ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီး ရဲက ဖမ်းဆီးရမိ
FNG၊ ၊ပါကစ္စတန် နိုင်ငံ ကရာချီ မြို့ တွင် ခင်ပွန်း ဖြစ်သူ ကို သတ်ဖြတ် ပြီး ၊ အမဲသား ငါးများ လို တုံးတစ် ၍ ချက် ပြုတ်ရန် စီစဉ် နေ သည့် အမျိုး သမီး တစ်ဦး အား ဒေသခံ ရဲတပ် ဖွဲ့ ကဗုဒ္ဓဟူးနေန့ ကဖမ်းဆီး လိုက်ပြီး နှစ်ရက် အကြာတွင် သတင်း ထုတ် ပြန် သည် ဟု CNN ရုပ်သံသတင်းတွင်ထုတ် လွှင့် သွား သည်။
အသက် ၃၂ နှစ် ( အချို့သတင်း များ တွင် ၄၂ နှစ်) အရွယ် ရှိ ဇိနတ် ဘီဘီ သည် အသက် ၁၇နှစ် အရွယ် ရှိ သူမ ၏ သမီး ဖြစ်သူ အား လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စော်ကား မှု ပြု ရန် ကြံစည် သောကြောင့်သတ် ဖြတ် ရ ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
Posted by 925 at 08:53 1 comments
သင်သည် ဤနှစ်ဝယ် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်ခြင်း၊
နှာပွခြင်းတို့ကို နှစ်ရှည်လများ ခံစားရပေအံ့။
ပညာရေး - နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ခြင်းပညာကို လေ့လာရတတ်သည်။
စီးပွားရေး - နှစ်ရှည်လများက အကြွေးများကိုပြန်ရကိန်းရှိသည်။
အချစ်ရေး - နှမချင်းမစာနာတတ်သူ၏ ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်ခံရတတ်သည်။
ယတြာ - မိမိနှာခေါင်းနှစ်ပေါက်ကို လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ပိတ်၍
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ကာ " နင့်သတင်းတွေ
ငါကြားနေရတယ် " ဟု မဲ့ကာရွဲ့ကာဖြင့် မာန်ပါပါဖြင့်ပြောပါလေ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သုံးမရဘူးဟုထင်ပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေတတ်သည်။ သံစူးခြင်း၊
သန်းတွယ်ခြင်း၊ သေးမထွက်ခြင်းတို့ကို ခံစားရတတ်သည်။
ပညာရေး - အသုံးမကျအောင်နေထိုင်နည်းကို ဆရာသမားသုံးဦးမှ လမ်းညွှန်တတ်သည်။
စီးပွားရေး - သူခိုးခိုးခံရတတ်သည်။ တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းကို ပစ္စလတ်ခတ်သိမ်းထားပါ။
အချစ်ရေး - သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တတ်သည်။
ယတြာ - တစ်ကိုယ်လုံးဆေးနီတို့ပါ။ ပြီးလျှင် လမ်းသုံးခွဆုံရာသို့သွား၍
Posted by 925 at 06:570comments
ဂျပန် ငါးပြတိုက် တစ်ခုမှ လျှပ်စစ် ငါးရှဉ့်များ ခရစ္စမတ် သစ်ပင်များကို မီးအလှဆင် ပေး
ဂျပန်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း Mie စီရင်စုမှ ငါးပြတိုက် တစ်ခုမှာ ခရစ္စမတ် သစ်ပင်တွေမှာ အလှဆင် ထားတဲ့ မီးတွေကို လင်းစေတဲ့ လျှပ်စစ် ငါးရှဉ့်တွေဟာ လာရောက် လည်ပတ် သူတွေကို ဆွဲဆောင် လျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တောင်အမေရိကတိုက် အမေဇုန်မြစ် အတွင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ လျှပ်စစ် ငါးရှဉ့်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ သားကောင် အစာကို ဖမ်းတဲ့ အချိန်မှာ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ဗို့ ၈၀၀ ခန့် ထုတ်လုပ် နိုင်ပါတယ်။
“မိုင်အီ” စီရင်စု Toba မြို့ရှိ အဆိုပါ ငါးပြတိုက်ဟာ လျှပ်စစ် ငါးရှဉ့်တွေ မွေးမြူထားတဲ့ ရေကန်ရဲ့ ရှေ့မှာ ခရစ္စမတ် သစ်ပင် နှစ်ပင်ကို စီစဉ်ထား ရှိထားပြီး ရေကန် ထဲက ငါးရှဉ့်တွေ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ချိန်မှာ ခရစ္စမတ် သစ်ပင်တွေက မီးတွေကို လင်းလာ အောင်စီမံ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးရှဉ့်တွေက လျှပ်စစ် ဓါတ်အားဗို့ ၁၀၀နဲ့ အထက် ထုတ်လုပ်ရင် ပန်းရောင် မီးလေးတွေ လင်းလာပြီး ဗို့ ၄၀၀ နဲ့အထက် ထုတ်လုပ် ရင်တော့ မီးအနီရောင်လေးတွေ လင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြကွက်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့ အထိ ပြသထား မှာဖြစ်ပြီး လာရောက် ကြည့်ရှုသူ တွေနဲ့ စည်ကား နေတယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
Facebook ကြီးသာပိတ်သွားရင် ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှာလဲ ။
Facebook တည်ထောင်သူ Mark Zuckerberg မှနေ၍ Facebook ကို မတ်လ ၂၀၁၂ မှာ ပိတ်ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ Facebook ကို လုပ်နေရတာ သူ့အတွက် အရမ်းစိတ်ဖိစီးမှု များနေပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
"Facebook က ထိန်းလို့မရတော့ပါဘူး" လို့ Palo Alto ရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Zuckerberg မှတဆင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ "နောက်ပြီးတော့ Facebook ကို လုပ်နေရတာ ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှု အရမ်းများနေတာကြောင့် ကျွန်တော် ဒီဟာကို အဆုံးသတ်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
Posted by 925 at 08:530comments
မောင့် ဖွားဖက်တော်ဖြင့် ကီလို ၂၃၀ ကို "မ" နိုင်သည့် ထိုင်ဝမ်အမျိူးသား...
အလုပ်ကြမ်းသမားအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့ ပြီးနောက် နာမကျန်းဖြစ်ခဲ့ ရသည့် ယန်ယိုစင်အမည်ရှိထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသား
တစ်ဦးဟာ ၉၉ ချိကုန်းစွမ်းအားသံမဏိအတွင်းအား စံပြယောကျာင်္း ဟုနာမည်ကျော်ကြားသည့် အမျိူးသားများ လိင်အင်္ဂါဖြင့် ကီလိုရာနှင့် 
ချီကာလေးသည့် သံမဏိပြားများကို မနိုင်သည့် နည်းပညာကိုလေ့ လာသင်ယူ
ကျင့်ကြံတတ်မြောက်ခဲ့ ပြီးနောက် ပြန်လည်ကျန်းမာသန်စွမ်းလာခဲ့ ပါတယ်...
ယန် ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကာယလုပ်သားအဖြစ် ဆင်းရဲပင်ပန်းသည့် 
Posted by 925 at 22:392comments
Posted by 925 at 21:020comments
ငှက်ပျောသီးအခွံကို စားခြင်းအားဖြင့်တော့ လူကို တက်ကြွရွှင်လန်းစေပါတယ်။ နောက်ပြီး မျက်စိအားကောင်းစေသလို မျက်စိတိမ်စွရောဂါများ အတွက်လည်း အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ဘယ်လိုစားရမလဲ ဆိုရင်တော့ သုတေသီတွေမှ အကြံပေးပြောကြားချက်အရ ငှက်ပျောသီးအခွံကို ရေနွေးနဲ့ ၁ဝ မိနစ်လောက်ပြုတ် လိုက်ပါ။ ပြီးရင် သစ်သီးဖျော်စက်ထဲမှာ ထည့်ဖျော်ပြီး ဖျော်ရည်အဖြစ်လဲ စားသောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ အခွံမှာ ကွဲပြားတဲ့ antioxidant ၆ မျိုးပါဝင် ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနှင့် နှလုံးရောဂါများကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာ Glenville က ရှင်းပြပါတယ်။
Posted by 925 at 04:360comments
Paracetamol ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အသက် အန္တရာယ် ရှိနိုင်
စကော့တလန် နိုင်ငံ Edinburg တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာ တွေ့ရှိချက် အရ အကိုက်အ ခဲ ပျောက်ဆေး ပါရာစီတမောကို နေ့စဉ် ပုံမှန် အနည်းငယ်စီ သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အသက် အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ပါရာစီတမော ဆေးကို ပမာဏ အနည်းငယ်သာ သောက်သုံးတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ သောက်သုံးမှု ဟာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် လပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့အခါမှာ ဆေးလွန်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိ သွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Posted by 925 at 01:210comments
သမီး​​​​မိန်း​​​​က​​​​လေး​​​​သာ ​​​​မွေး​​​​ဖွား​​​​​​​ပေး​​​​သည့်​​​ ဇနီး​​​​သည်အား​​​​ ခင်ပွန်း​​​​ဖြစ်သူ​က ဒဏ်​​​​ငွေရိုက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အမျိုး​​​​သား​​​​ တစ်ဦး​​​​သည် ၎င်း​​​အတွက် သမီး​​​​မိန်း​​​​က​​​​လေး​​​​သာ ​​​​မွေး​​​​ဖွား​​​​​​​ပေး​​​​နိုင်သည့်​​​ ဇနီး​​​​ဖြစ်သူ​အား​​​​ ဒဏ်​​​​ငွေရိုက်ခဲ့​​​​​​ကြောင်း​​​​ သိရှိရသည်။
သမီး ​​​​​​​မွေး​​​​လာခြင်း​​​​အ​​​​ပေါ် မ​​​​ကျေမနပ် ဖြစ်​​​​နေသည့်​​​ ဘီဟာ ​​​​ဒေသခံ အမျိုး​​​​သား​​​​က ဇနီး​​​​အား​​​​ ရူ​ပီး​​​​​​​ငွေ ၂၅၀၀၀ ​​​​ပေး​​​​​​​ဆောင်ရန် ​​​​တောင်း​​​​ဆိုခဲ့​​​ရာ ​​​​ဒေသခံ အာဏာပိုင်များ​​​​က ကြား​​​​ဝင်ခဲ့​​​ရသည်။ နာဂစ်ဟု အမည်​​​​ပေး​​​​ထား​​​​​​​သော မိန်း​​​​က​​​​လေး​​​​ငယ်သည် ယခုသီတင်း​​​​ပတ် အ​​​​စောပိုင်း​​​​က ယူ​တာပရာဒက်ရှိ ရွာငယ်တစ်ခုတွင် ​​​​မွေး​​​​ဖွား​​​​ခဲ့​​​သည်။ ထို​​​​နေ့​​​သည် ကမ္ဘာ့​​​လူ​ဦး​​​​​​​ရေ သန်း​​​​ ၇၀၀၀ ပြည့်​​​ အထိမ်း​​​​အမှတ်​​​​နေ့​​​လည်း​​​​ဖြစ်သည်။ သမီး​​​​ငယ် ​​​​မွေး​​​​ဖွား​​​​လာ​​​​သော်လည်း​​​​ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင် ဖခင်ဖြစ်သူ
Posted by 925 at 00:130comments
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်း (History oF Singapore)
Posted by 925 at 08:170comments
Posted by 925 at 18:380comments
ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် လေလံဈေးနှင့် ရောင်းချခဲ့သည့် ဖာရာရီ ပြိုင်ကား
(၁၉၅၇)ခုနှစ်က ထုတ်လုပ်သည့် တက်စ်တာရိုဆာ အမျိုးအစား ဖာရာရီ ပြိုင်ကား တစ်စီးကို ဂွတ်ဒင်းအန်ကမ်မမှ ပက်ဘယ်ဘိခ်ျမြို့မှာ လေလံတင်ရာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၆.၃၉)သန်း ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လေလံဈေးနှုန်းသည် ယခင်စံချိန်တင်
ရောင်းချသည့် ဈေးနှုန်းထက် ဒေါ်လာ (၄)သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ပြိုင်ကားကို ယခင် စံချိန်တင် ဈေးထက် ပိုမိုရရှိနိုင်ကြောင်း ကြိုတင် မျှော်မှန်းထားပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို ရောင်းချလိုက်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ မှန်းထားသည်ထက် အဆမတန် သာလွန် နေသည်။
Posted by 925 at 05:340comments
US ဒေါ်လာ (၁.၃၇၅)သန်းဖြင့် လေလံတင် ရောင်းချခဲ့သည့် ပိုရှေးကား
ဟောလိဝုဒ် နာမည်ကျော် မင်းသားကြီး စတိဗ်မက်ကွင်း ပိုင်ဆိုင်သည့် ပိုရှေး မော်တော်ကားကို စံချိန်တင် ဈေးနှုန်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁.၃၇၅)သန်းနဲ့ လေလံတင် ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ (၁၉၇၀) ခုနှစ်ထုတ် မီးခိုးရောင် ၉၁၁ အက်စ်ပို ရှေးကားကို မင်းသားကြီး မက်ကွင်းကပြိုင်ကား
မောင်းသမား တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လာ့မဲန်စ် ရုပ်ရှင်ကားမှာ
မောင်းနှင် ပြသခဲ့သည်။ မင်းသားကြီး မက်ကွင်း မောင်းပြသည့် ပိုရှေး ကားသည် လာ့မဲန်စ် ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းများမှာ နေရာယူခဲ့သည်။ မက်ကွင်းရဲ့ ပိုရှေးကားကို ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ရှိ မွန်တာရေးမြို့မှာ အာလ်အမ် လေလံကုမ္ပဏီက သြဂုတ်လ လေလံပွဲစဉ် (၁၉)မှာ ရောင်းချခဲ့သည်။ ၉၁၁ ပိုရှေးကားတွေအနက် ဈေးအမြင့်ဆုံး ရရှိသည့် ကားတစ်စီး ဖြစ်သည်။ ပိုရှေး ကားတွေကို ရောင်းချရာ ပုံမှန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ငါးသောင်းခန့်သာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by 925 at 04:210comments
Apple ကုမ္ပဏီမှ နောက်ဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် iPhone 4s ၏ ဘက်ထရီမှာ ထင်မှတ် ထားသည့် ကာလ အတိုင်းအတာ မတိုင်မီ အချိန်အတွင်း အလွန်ပင် လျင်မြန်စွာ ကုန်သွားကြောင်း အွန်လိုင်း လူမှု့ရေး ဆိုက်များတွင် လူရာပေါင်း များစွာမှ သတင်း ပေးပို့ ခဲ့ကြကြောင်း Mercury သတင်းတွင် အင်္ဂါနေ့က ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။ အချို့သော သုံးစွဲသူများ၏ အပြောအရ ၎င်းတို့ ဝယ်ယူထားသည့် iPhone 4s မှာ အနည်းငယ်သော သုံးစွဲချိန်အတွင်း ဘက်ထရီ ကုန်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် တစ်ရက်အတွင်း
ဘက်ထရီအား ပြန်မသွင်းဘဲ သုံးစွဲ၍ မရကြောင်း ကိုလည်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by 925 at 04:010comments
လူနို့နှင့်တူညီသော နို့ ကို နွားမှတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်မည်
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လူမိခင်၏ နို့နှင့် အလား
သဏ္ဍာန်တူသောနို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သော နွားတစ်မျိုးကို ဖန်တီးလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အာဂျင်တီးနားဓါတ်ခွဲခန်းမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
လူသားဗီဇဖြင့် စပ်ယူပြီးမွေးဖွားခဲ့သော ရိုစီတာအီဆာ အမည်ရှိ ကလုံးနွားသည် လူနို့ရည်တွင် ပါဝင်သောပရိုတင်းဓါတ်ပါရှိသည့် လူသားဗီဇဖြင့်ပေါင်းစပ်ကာ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အာဂျင်တီးနား စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံနည်းပညာဌါနက ဇွန်လ(၉) ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
ရိုစီတာအီဆာ ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဧပြီလ ၆ရက်နေ့က မွေးဖွားရာ ပုံမှန်ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ၄၅ ကီလိုဂရမ် (၉၉) ပေါင် ပိုလေးပြီး ပုံမှန်မွေးကင်းစနွား၏ ၂ ဆ ဖြစ်နေသောကြောင့်ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားခဲ့ရသည်ဟု နည်းပညာဌါန၏ ကြေငြာချက်တွင် ထည့်သွင်းရေးသွင်းထားသည်။
ရိုစီတာသည် အရွယ်ရောက်ချိန်တွင် လူ၏နို့နှင့် ဆင်တူသော နို့ကိုထုတ်လုပ်မည်ဟု အဆိုပါကြေငြာချက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က နွားနို့ထဲသို့လူသားမျိုးရိုးဗီဇ ၂ မျိုးဖြစ်တဲ့ Protein Lactoferrin နဲ့ Lysozyme တိုိ့ကိုပေါင်းစပ်ပေးခြင်းဖြင့် မွေးကင်းစကလေးငယ်ကို ဘက်တီးရီးယား၊ဗိုင်းရပ်စတဲ့
ရောဂါပိုးများကနေ သဘာဝါလျောက်ကာကွယ်ပေးရန်ရည်ရွယ်ပါတယ် ဟု သုတေသနပညာရှင် အန်ဒရီယန်မူတို က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
မျိုးရိုးဗီဇဖြင့်ပေါင်းစပ် clone ပြုလုပ်ခြင်းကိုအာဂျင်တီးနားသိပ္ပံပညာဌါနနှင့် ဆန်မာတင် အာဂျင်တီးနား အမျိုးသားတက္ကသိုလ် တို့က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by 925 at 01:360comments
စံပြုလောက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့အတွက် အဓိကအချက် (၅) ချက်
ဆရာသမားတစ်ယောက်ကပြောဖူးတာပေါ့ . ..
Ideal Marriage ဆိုတဲ့ စံပြုလောက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမျိုးရချင်ရင်တဲ့။
သူပြောတဲ့ စံငါးခုနဲ့ ကိုက်ရွေးတဲ့
သူပြောတာက . ..
1- loving each other
2- mature brain
3- proper income
4- good health and
5- acceptable both sides
1.loving each other
ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်မြတ်နိုးခြင်း ၊ အပြန်အလှန်
လေးစား နားလည်မှုပေးခြင်းတို့ ရှိမှသာ ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့
Posted by 925 at 18:310comments
မွေးရာပါ မျက်လုံးတစ်လုံးသာရှိသော ငါးမန်းပေါက်တစ်ကောင်အား ငါးဖမ်းသမားတစ်ဦးမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ယခုနှစ် နွေရာသီက ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ပင်လယ်ကွေ့တွင် ဖမ်းမိခဲ့သော ကြီးမားတဲ့ ငါးမန်းတစ်ကောင်၏ဝမ်းဗိုက်အား
ထိုသန္ဓေသားငါးမန်းပေါက်လေးဟာ မွေးရာပါ မျက်လုံးတစ်လုံးတည်း
ပါသည့်အတွက် လူသိများခဲ့ပြီး Pisces Fleet Sport fishing က ဂျူလိုင်လတွင် ဓါတ်ပုံနှင့်တစ်ကွ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ဒီသတင်းဟာ Photoshop ဖြင့်ပြုလုပ်ထားထားသလိုလို ၊ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းလိုလို နဲ့တော်တော်လေးကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါးမန်းသုတေသနပညာရှင်တွေ သေသေချာချာ
စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ငါးမန်းအစစ်ဖြစ်ကြောင်း၊မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက် မတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အသက်ရှင်
နေတာဖြစ်တယ်လို့ MSNB သတင်းအရ သိရှိရပါတယ်။
မက္ကဆီကို ပညာဌါနတစ်ခုမှ ငါးမန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Felipe Galvan Magana က “ ဒီလိုမျိုးအင်မတန်ဖြစ်ခဲပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေ အမျိုးပေါင်း (၅၀) ထက်မနည်း မှတ်တမ်းရှိခဲ့ဖူးပါတယ်” လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ငါးမန်းသန္ဓေသားဟာ ထူးခြားတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပြီး ၊ ဦးဏှောက်ရဲ့အရှေ့ဘက်ပိုင်းက အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတဲ့ မျက်လုံးရဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာ မဖြစ်ထွန်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မျက်လုံးတစ်လုံးတည်းရှိတာ ဦးဏှောက်နဲ့ မျက်နှာအကြား ရောင်စဉ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဒီဖြစ်စဉ်ကို holoprosencephaly လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကိုသားလျှောတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အသေမွေးတဲ့အခါ အခါပဲဖြစ်ဖြစ် တော်တော်များများ မှာ စမ်းသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
Posted by 925 at 03:120comments
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းများ အတန်သင့် ခရီးရောက်လျှက်ရှိ
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်
ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဦးဆောင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင် ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရန် ဆောင်ရွက်မှုများ စတင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ လက်ရှိ၌ အဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးပါသော ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးပါရှိသော လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့၏ ပထမဆုံး
ခြေလှမ်းအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Thaicom ကုမ္ပဏီနှင့် ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ နားလည်မှု စာချွန်လွှာကို နေပြည်တော်၌ လက်မှတ်ရေးထိုး အောင်မြင်ခဲ့ပြီးကြောင်း သိရသည်။
Posted by 925 at 02:01 1 comments
သွေးကင်ဆာ ရောဂါ ကုသရန် ဆေးဝါး အသစ် တစ်မျိုးကို အမေရိကန် အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရေး ဌာနမှ ထောက်ခံချက်ပေး
အမေရိကန် အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါးကြီးကြပ် ကွပ်ကဲရေး ဌာန FDA ဟာ သွေးကင်ဆာ ရောဂါသည်တွေကို ကုသဖို့ Erwinaze ဆေးဝါးကို ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က အတည်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သွေးကင်ဆာ ရောဂါဟာ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ထဲမှာ သွေးဖြူဥတွေ များစွာ ဖြစ်ပေါ်စေ တဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးဖြူဥ တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်း ရောဂါ ကူးစက်မှုကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Erwinaze ထိုးဆေးကို တစ်ပတ်မှာ ၃ ကြိမ်
Posted by 925 at 01:500comments
ကမ္ဘာ့သက်တမ်း​​​​အရင့်​​​ဆုံး​​​​ ​​​မော်​​​တော်ကား​​​​ကို ​​​လေလံတင် ​​​ရောင်း​​​​ချသွား​​​​မည်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ​​​ပေါ်တွင် သက်တမ်း​​​​ အရှည်ကြာဆုံး​​​​ ​​​မော်​​​တော်ကား​​​​အဖြစ် တရား​​​​ဝင် သတ်မှတ်ခြင်း​​​​ ခံထား​​​​ရသည့်​​​ ​​​မော်​​​တော်ကား​​​​ကို စတင်ထုတ်လုပ်ထား​​​​သည်မှာ ၁၂၇ နှစ် ကြာမြင့်​​​ခဲ့​​​ပြီဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အဆိုပါ ​​​မော်​​​တော်ကား​​​​ကို ကြမ်း​​​​ခင်း​​​​​​ဈေး​​​​ ​​​ပေါင်စတာလင် ၁.၆ သန်း​​​​ သတ်မှတ်ကာ လာမည့်​​​လာတွင် ​​​လေလံတင်သွား​​​​မည်ဖြစ်သည်။
Posted by 925 at 07:440comments
အစ္စရေး သုတေသီများ လှုပ်ရှားသွားလာမှု အတွက် အကူအညီပေးမည့် ဦးနှောက်အတုကို တီထွင်
Tel Aviv တက္ကသိုလ်ရှိ အစ္စရေး သုတေသီတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် လှုပ်ရှားမှု ဆုံးရှုံးတာကို ပြန်လည် အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ Chp ပြား တစ်မျိုးကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ချစ်(စ်)ပြားကို ဦးနှောက် အရှေ့ပိုင်းသို့ ထည့်သွင်း အစားထိုး ကုသခြင်းဖြင့် ထိခိုက် ပျက်စီး သွားတဲ့ ဦးနှောက်ကို ကုသ ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခု ဖြစ်လာ နိုင်တယ်လို့ အဆိုပါ သုတေသီများက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
Posted by 925 at 01:140comments
ဒီနေ့ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကလေးများနေ့ပါ။ ဒီနေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဂူဂယ်လ်က သူ့ရဲ့ www.google.co.in ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယအတွက် စာမျက်နှာမှာ ၇နှစ်အရွယ် အိန္ဒိယသမီးငယ်လေး ဗာရှား ဂုပ်ပတား ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာ အိန္ဒိယရိုးရာ တူရိယာပုံလေးတွေကို တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ဂူဂယ်လ်မှာသုံးမယ့် ပုံအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတ၀ှမ်းက ကျောင်းသားလူငယ်ပေါင်း ၁သိန်းကျော်တို့ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့အထဲကနေမှ သူ့ရဲ့ ပန်းချီလက်ရာကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။Google Doodle ဆုရတဲ့ ဗာရှားဂုပ်ပတား
“ကမ္ဘာကြီးအတွက် အိန္ဒိယရဲ့ လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပုံဆွဲပြိုင်ရမယ်လို့ ဆရာမက ပြောတယ်။ အိန္ဒိယမှာက ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံရှိကြတယ်။ တေးဂီတ တီးမှုတ်ဖျော်ဖြေတာဟာ အိန္ဒိယအတွက် အရေးပါတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတခုဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ တူရိယာတွေက ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားကို ပြန့်နှံ့သိရှိနေကြပြီ။ ဒီတူရိယာတွေကိုလည်း သမီးအမြဲတွေ့ဖူးနေတော့ ဒီပုံတွေ ဆွဲလိုက်တယ်” လို့ ပန်းချီဆရာမဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဗာရှားဂုပ်ပတားက ပြောပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ဗာရှားဂုပ်ပတားလေးဟာ ဂူဂယ်လ်ရဲ့ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ရယ်၊ တနှစ်စာ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်နဲ့ လက်ပ်တော့ပ်ကွန်ပြုတာတလုံး၊ အိုင်တီနည်းပညာလေ့လာသင်ကြားမှုအတွက်
ထောက်ပံ့ငွေ ရူပီး ၂ သိန်းကို ရလိုက်ပါတယ်။
Posted by 925 at 08:410comments
ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျူးဘား နိုင်ငံသားအသက်(၆၇)နှစ် အရွယ်ဆေးပြင်းလိပ်သမား “ဂျိုးဆေး ကက်(စ်)တလာ”ဟာ အရှည်(၈၁.၈)မီတာ၊ အချင်း(၄)စင်တီမီတာရှိတဲ့ ဆေးပြင်း လိပ်ကြီးကို အပြီးသတ်ပြုလုပ်ပြီး ဂင်းနစ် စံချိန်သစ်တင်လိုက် နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဆေးပြင်း လိပ်ကြီးကို မေလ(၃)ရက်နေ့ကနေ (၇)ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွား လုပ်ငန်းပြပွဲ “အက်ဖ် အိုင်တီ ကျူးဘားတူးသောင်ဆင်အယ်လဲဗင်း”မှာ
ပြသထားပါတယ်။ “ကက်(စ်)တလာ”က သူဟာ မီတာ(၁၀၀)ရှည်လျားတဲ့ နောက်ထပ်
ဆေးပြင်းလိပ်တစ်လိပ်ကိုလည်း ပြုလုပ်နေကြောင်း၊ ကျူးဘားနိုင်ငံဟာ အကောင်းဆုံး ဆေးရွက်ကြီးများ ထွက်ရှိရာနေရာဖြစ်တဲ့ အတွက် အရှည်လျားဆုံး ဆေးပြင်းလိပ်ကိုလည်း ဒီဒေသမှာ ပြုလုပ်နိုင်ရမှာ
ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။ ယခုတစ်ကြိမ် စံချိန်သစ်တင်တဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “ကက်(စ်)တလာ” ဟာ (၂၀၀၉) ခုနှစ် ကလည်း မီတာ(၆၀)ရှည်လျားတဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်ပိုင်ရှင်အဖြစ် စံချိန်တင်ခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပြင်းလိပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းကြောင်း တလျှောက် မှာ “ကက်(စ်)တလာ”ဟာ (၂၀၀၁)ခုနှစ်မှာ (၁၁.၀၄) မီတာရှည်တဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်ပြုလုပ်ပြီး ပထမဆုံး စံချိန်တင်လာခဲ့သလို (၂၀၀၃)၊(၂၀၀၅)နဲ့ (၂၀၀၈)ခုနှစ်တို့မှာလည်း ဂင်းနစ်စံချိန်ချိုးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အသက်(၁၄)နှစ် အရွယ်ကတည်းက စတင်ပြီး ဆေးပြင်းလိပ်လိပ်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒါကို အနုပညာတစ်ရပ် အဖြစ် လေ့လာလိုက်စားလိုသူဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 06:110comments
ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ice-cream ကိတ်မုန့်
ကနေဒါနိုင်ငံမှ Dairy Queen ကုမ္ပဏီဟာTEorontoမြို့ရဲ့ Yonge and Dundas ရင်ပြင်မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ice-creamကိတ်မုန့် ပြုလုပ်ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန် တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Dairy Queenကုမ္ပဏီဟာ နှစ်ပေါင်း(၃၀)အတွင်းမှာ ice-cream ကိတ်စုစုပေါင်း (၅၂)သန်းရောင်းချပြီးတဲ့နောက် အခုလို
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ice-cream ကိတ်ပြုလုပ်ဖို့အတွက် လူပေါင်း(၁၀၀)နဲ့
အချိန်တစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင် စီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီကိတ်မုန့်ကြီး ကို ရေခဲမုန့် (၉၀၀၀)(ကိုးထောင်)ကီလိုဂရမ် ကိတ်မုန့်(၉၁)ကီလိုဂရမ်၊ ကြက်ဥအကာ (၁၃၆)ကီလိုဂရမ်တို့နဲ့ စားဖိုမှူးတွေဟာနေ့ရောညပါ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး(၂၀၀၆)ခုနှစ်က တရုတ်နိုင်ငံက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကီလိုဂရမ်
(ရှစ်ထောင်)နီးပါးရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် ice-creamကိတ်မုန့်ရဲ့ စံချိန်ကို ချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ကိတ်မုန့်ကြီးကို Yonge and Dundas ရင်ပြင်မှာ စုဝေးနေတဲ့ လူအများကို ခွဲဝေရောင်းချကာ ရရှိတဲ့ငွေအားလုံးကို ကလေးများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေး အစီအစဉ်တွေ အတွက် လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 05:230comments
Kiwi သီး စားခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန် လျော့ကျစေခြင်းရှိ ၊ မရှိ သုတေသီများ လေ့လာလျက် ရှိ
တစ်နေ့ကို ကီဝီသီး ၃ လုံး စားခြင်းဖြင့် သွေးပေါင်ချိန် သိသိသာသာ ကျစေပြီး သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့
နော်ဝေး နိုင်ငံက သုတေသီတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Oslo တက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေဟာ သွေး တိုး ဝေဒနာ အနည်းငယ် ခံစားနေရတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၈၈ ဦးကို ၂ လကြာ လေ့လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အဲ့ဒီ ၁၈၈ ဦးကို အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ခွဲပြီး တစ်ဖွဲ့ကို နေ့စဉ် ကီဝီသီး ၃ လုံး စားသုံးစေခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုတော့ ပန်းသီးတစ်လုံး နေ့စဉ် စားသုံးစေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လေ့လာမှု အချိန်ကာလ ၂ လပြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ကီဝီသီး စားတဲ့ အဖွဲ့မှာ ပါဝင်သူတွေက သွေးပေါင်ချိန် သိသိသာသာ ကျဆင်း သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်နေ့ကို ပန်းသီးတစ်လုံး စားတာထက် ကီဝီသီး ၃ လုံး စားတာက တစ်နေ့ကိုသွေးပေါင်ချိန်ကို သင့်တင့်မျှတစေတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ အဆိုပါ လေ့လာမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပို ပြီး တိကျ သေချာတဲ့ လေ့လာ စမ်းသပ်မှုတွေကိုတော့
နောက်ထပ် ဆောင်ရွက် သွားရဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 05:010comments
တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အရေခွံကို အရှင်လတ်လတ်ခွာယူတဲ့ တရုတ်ပြည်က သားရေ လုပ်ငန်း
ကြောင်လေးတွေ ခွေးလေးတွေရဲ့ သားရေကိုသတ်ပြီးမှခွါယူရင်ခက်ခဲတဲ့အတွက်မသေရုံလေးရိုက်နှက်
သတိ ။ ။ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်မှုနည်းသောသူများမကြည့်ရ။
Posted by 925 at 04:375comments
အမေရိကန် ဒေါ်လာ ငွေတစ်သိန်းဟာ များပြားလှတဲ့ ပိုက်ဆံဖြစ်ပြီး အဲဒီငွေက တစ်ဆင့် ပြိုင်ကားအသစ် တစ်စီးစာ ဒါမှမဟုတ် လှေတစ်စင်း ဒါမှမဟုတ် အခြားအကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အရာတွေကို ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Audi ကားသစ်ကို ထည်လဲစီးပြီး ကိုယ်ပိုင် ဇိမ်ခံရွက် လှေကို ပိုင်ဆိုင်သူ သူဌေးတစ်ယောက် အတွက် ပြောပလောက်တဲ့ ပမာဏ တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ မကြာသေးမီ ကာလက နာမည်ကြီး မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါး ထုတ်လုပ်သူ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Zafirro က ကန့်သတ် ထုတ်လုပ် လိုက်တဲ့ Zafirro Iridium မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ တစ်သိန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by 925 at 06:220comments
ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း ၀င်သွားပြီ ဖြစ်သည့် Tokyo Sky Tree
ဂျပန် နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့မှာ ဆောက်လုပ်ဆဲ ဖြစ်တဲ့ ၆၃၄ မီတာ အမြင့်ရှိ Tokyo Sky Tree ရုပ်သံ လွှင့် မျှော်စင်ဟာ ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး မျှော်စင် အဖြစ် ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ဗြိတိသျှ ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း စာအုပ် စီစဉ် ထုတ်လုပ်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ Alistair Richards က ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေး နေ့က တိုကျိုမြို့ရှိ ဟိုတယ် တစ်ခုမှာ အခမ်းအနားနဲ့ ပေးအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုခံရတာဟာ တိုကျိုမြို့ရဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းကို များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း တာဝန် ရှိသူတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Tokyo Sky Tree ကို အများပြည်သူ လေ့လာနိုင်ဖို့ အတွက် လာမယ့်နှစ် မေလမှာ ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အခုလို ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်း ၀င်ဖို့ အတွက်ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက လျှောက်ထား ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 05:150comments
1680.. မွေးနေ့ကိတ် ပေါ်တွင် ဖယောင်တိုင်ထွန်းခြင်း သမိုင်း
မွေးနေ့ပွဲများ ကျင်းပသောအခါ မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းသောဓလေ့မှာ သိပ္ပံအမြင် သိပ္ပံသဘောတရားတို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါ။
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့က မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်တွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပေးခြင်းသည် မွေးနေ့ရှင်ကို ဂုဏ်ပြုရာရောက်သည်။ နောင်လာမည့် အသက်တစ်နှစ်တာအတွက် ဖယောင်းတိုင်အလင်းက ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်များကို ယူဆောင်လာနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြ ပါသည်။
Posted by 925 at 20:230comments
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို ဆေးထိုးသတ်ခဲ.ကြောင်း ဒေါက်တာမာရေးဝန်ခံပြီ
ကမ္ဘာကျော် ပေါ.ဂီတ ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် အသက်(၅၀နှစ်) ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံလော့အိန်ဂျလိစ်မြို့ ရှိ သူ၏နေအိမ်တွင်
ဦးနှောက်ထည်းသို့ အောက်ဆီဂျင် မရောက်သော ရောဂါဖြင်. သေဆုံးသွားခဲ.သည်။ မိုက်ကယ်သေဆုံး မှုမှာသွေးရိုးသား ရိုး ဟုတ် မဟုတ်ဆိုသည်မှာ မည်သူမျှ တပ်အပ်မပြောနိုင်ခဲ.ပေ။ သန်းနဲ.ချီသော သူ.ပရိသတ်များမှာလည်း သည် ပြဿနာကို စိတ်ဝင်စားခဲ.သည်။ ဘာကြောင်.လည်း ဘယ်သူ လုပ်တာလည်း ---- လဲ-- မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို တိကျစွာဖြေနိုင်ဖို. လည်း မည်သူမျှမတတ်နိုင်ခဲ.ပေ။
Posted by 925 at 16:470comments
အလင်းထုတ်နိုင်သည့် မှိုပင်တစ်မျိုးကို နှစ်ပေါင်း (၁၇၀)အကြာတွင် ပြန်လည် တွေ့ရှိခဲ့
အမှောင်ထဲမှာ အလင်းရောင် တောက်ပနိုင်တဲ့ မှိုပင်တစ်မျိုးကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ မိုးသစ်တောများ အတွင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှိုပင်တွေကို သိပ္ပံပညာရှင် “ဒန်နစ်ဒေရှာဒန်”နဲ့ ဆန်ဖရန်ဆစ္စကို
ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က (၂၀၀၉)ခုနှစ်အတွင်း ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါမှာ သိပ္ပံညာရှင်တွေဟာ အဲဒီမှိုတွေကို “နီယို နော်သောပန်နစ်စ်” အုပ်စုဝင်အဖြစ် အမျိုးအစား ခွဲခြားထားပြီး ဒီမှိုတွေ့ရှိမှုကို မိုင်ကိုလိုဂျီယာ ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို အလင်းရောင် ထုတ်နိုင်တဲ့ မှိုတွေကို (၁၈၄၀)ခုနှစ် တုန်းကသာ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်
တွေ့ရှိခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှိုတွေမှာ ဘာကြောင့် ဒီလိုကိုယ်ပိုင် အလင်းရောင် ထုတ်လုပ်နိုင်နေတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ သိပ္ပံနည်းကျ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီတွေကတော့ အဲဒီမှိုပင်ထဲမှာ ပိုးစုန်းကြူးတွေ မှာပါတဲ့ ဓါတုဒြပ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ လူစီဖာရင် နဲ့ လူစီဖရေ့စ် တွေပါတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုး အမှောင်ထဲမှာ အလင်းထုတ်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ လူစီဖရေ့စ်ဟာ လူစီဖာရင်၊ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ရေတို့ ဓါတ်ပြုပြီး အလင်းရောင် ထုတ်နိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မှိုတွေမှာ အဲဒီဓါတ်တွေ ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊ မရှိတို့တော့ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွေ မလုပ်ရသေးပါဘူး။ လူအများကတော့ ဒီလို အလင်းရောင်ထုတ်နိုင်တဲ့ မှိုတွေကို ကြောက်လန့်ကြပြီး ၀ိဥာဉ်မှိုများလို့ ခေါ်ဆိုကြကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by 925 at 07:570comments
ကားစီးရေ စီတန်းမောင်းနှင်ပြီး ကမ္ဘာ့စံချိန်တင် လိုက်သည့် အမေရိကန်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကာဒီလက်ခ်ကား အစီးရေ အများဆုံး စီတန်းပြီး လှည့်လည် မောင်းနှင်ပြကာ ကမ္ဘာ့စံချိန်သစ် တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စံချိန်သစ် တင်နိုင်ဖို့ ဗာမောက်ပြည်နယ် ဘာတွန်မြို့မှာ ကာဒီလက်ခ်ကား အစီးရေ (၂၉၈)စီးကို တစ်မိုင်နီးပါး ရှည်လျားသည့် ယာဉ်တန်းကြီးအဖြစ် စုစည်းပြီး လှည့်လည် မောင်းနှင်
ပြသခဲ့သည်။ ယာဉ်တန်းကြီးကို ကာဒီလက်ခ် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ ဟင်နရီလာလဲန်ရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဆွေမျိုးသားချင်း ဇနီးမောင်နှံက (၁၉၅၉)ခုနှစ်ထုတ် ပန်းရောင် ကာဒီလက်ခ်ကားကို ဦးဆောင် မောင်းနှင်ခဲ့သည်။
Posted by 925 at 06:510comments
အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးကို တီဗီ ကွန်ပျူတာ လုံးဝ ပေးမကြည့်နဲ့
ကလေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အမေရိကန်သမားတော်အဖွဲ့ (American Academy of Pediatrics) က အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေကို တီဗီနဲ့ ကွန်ပျူတာ စခရင် လုံးဝ မကြည့်စေဖို့ မိဘများကို သတိပေးခဲ့သည်။
အသက် ၈ နှစ်အောက်တွေကိုလည်း ကွန်ပျူတာနဲ့ တီလီဗေးရှင်း စခရင်တွေရှေ့မှာ အချိန်ဖြုန်းတာကို ကန့်သတ်ထားဖို့ အစီရင်ခံစာတစ်စောင် မကြာခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်လွန်းသေးတဲ့ ကလေးတွေကို တီဗီ၊ ကွန်ပျူတာ ကြည့်ရှုစေခြင်းဖြင့် မည်သည့်ပညာရေး အကျိုးအမြတ်မှ ရရှိစေမှာ မဟုတ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘော်စတွန်မြို့မှာ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ သမားတော်များအဖွဲ့က တီဗီစခရင် ကြည့်လွန်းတဲ့ ကလေးတွေ ကလေးဆေးခန်းတွေမှာ ပြုံရောက်နေတဲ့အကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကလေးငယ်တွေကို တီဗီပြပြီးစာသင်တာ၊ အိမ်နောက်ဖေးမှာ မိဘတွေ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ကလေးကို တီဗီရှေ့ပို့ထားတာတွေဟာ နုနယ်တဲ့ ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်ဟု ဆိုသည်။
Posted by 925 at 17:310comments
ဂျာမနီ နိုင်ငံရှိ မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်သည့် ဘွန်းတွင် လမ်းမများပေါ်တွင်
ပြည်.တန်ဆာ အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးသမီးများ အတွက် အခွန်ပေးဆောင်စေမည့် မီတာများ တပ်ဆင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယခုလို ပြုလုပ်ခြင်းမှာ နိုင်ငံအတွင်း သက်တမ်း အကြာဆုံး အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် လိင်မှုလုပ်ငန်း များ အတွင်း ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အခွန်ကောက်ခံမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခု အစီအစဉ်ကြောင့် လမ်းမများေ ပ်ါတွင် ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးသမီးများအတွက်
Posted by 925 at 09:360comments
ရောဂါပိုးကူးစက် ၀င်ရောက်မှုကို သတိပေး အချက်ပြမည့် ပတ်တီးတစ်မျိုး
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသီတွေဟာ ဒဏ်ရာတွေမှာ ရောဂါပိုး ၀င်ရောက်နေပါက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အောက်မှာ သတိပေး အလင်းရောင်ခြည် ထွက်တဲ့ ပတ်တီး တစ်မျိုးကို တီထွင်လိုက်ပြီလို့ သိရပါသည်။ တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေရဲ့ ပြောကြားချက် အရ အဆိုပါ ပတ်တီးအတွင်းမှာ မော်လီကျူးတွေ ပါရှိတဲ့ ဂျယ်လ် တစ်မျိုး ထည့်သွင်းထားပြီး ဒဏ်ရာတွေမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုး ၀င်ရောက်နေပါက အဆိုပါ ဂျယ်လ် ဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အောက်မှာ ပန်းရောင် တောက်ပနိုင်တဲ့ အလင်းရောင် တစ်မျိုးကို လင်းလက်စေတဲ့ အတွက် အန္တရာယ်ရှိ တဲ့ ဘက်တီးရီးယား ပိုးကူးစက်နေမှုကို သိရှိစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။
တရုတ် တောင်ပိုင်းတွင် ကြေးနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ခေတ်ဟောင်း ဓားတစ်လက် တူးဖော်ရရှိ
သက်တမ်း(၂၂၀၀) ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကြေးနဲ့ ပြုလုပ် ထားတဲ့ ရှေးခေတ်ဟောင်း ဓားတစ်လက်ကို တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း စီယမ်ကျင်း ပြည်နယ်မှာ
တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ ရှေးဟောင်း သုတေသီ တွေက ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ သိရပါသည်။ အဆိုပါ ဓားရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဟာ ဘီစီ(၄၇၅)နဲ့ (၂၂၁)အကြား ၀ါရင်း ပြည်နယ်ခေတ်မှာ ထွင်းထု ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၊ ဓားဟာ အလှအပနဲ့ တန်ဆာဆင်မှု နည်းပါးတဲ့ အတွက် အဲ့ဒီခေတ်က စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ မူလ ဓားပိုင်ရှင်နဲ့ ဓားကို ဘယ်နေရာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ် ၊ ဘယ်နေရာမှာ အသုံးပြု ခဲ့တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုချိန်ထိ မသိရှိ ရသေးကြောင်း ၊ အဆိုပါ ဓားကို ထိန်းသိမ်း ထားရှိတဲ့ နမ်ကျင်း ပြတိုက်မှ ပြတိုက်မှူးက ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ အဲ့ဒီ ဓားကို နမ်ကျင်း ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် စီယမ်ကျင်း မှ အလုပ်သမား တစ်ဦးက မြစ်ကမ်းပါးရှိ ကျောက်ပုံတွေက ကျောက်တွေ ကို ရွေး ချယ်သန့်စင် နေချိန်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။ အဲ့ဒီ အလုပ်သမားဟာ အဆိုပါဓားကို ရှေးဟောင်း သုတေသန ဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူတွေကို အပ်နှံခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါသည်။
Posted by 925 at 07:460comments
Abraham Lincoln ပုံတူ ရုပ်တုမှ ကြေးဓား တစ်ချောင်း ပျောက်ဆုံး
အမေရိကန် သမိုင်းမှာ ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ သမ္မတဟောင်း Abraham Lincoln အုတ်ဂူ ကနေ ကြေး ဓား တစ်ချောင်း ပျောက်ဆုံး နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရဲ့ ၁၆ ယောက်မြောက် သမ္မတ Abraham Lincoln ရဲ့ သမိုင်းဝင် အုတ်ဂူဟာ အီလီနွိုက် ပြည်နယ် Springfield မြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်။